vCita: Balanqaadyada, Bixinta, iyo Xariirka Xiriirka ee Goobaha Ganacsi Yaryar | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 9, 2014 Khamiista, Oktoobar 9, 2014 Douglas Karr
LiveSite ee vCita waxay qaadataa dhammaan dhibaatooyinka ku saabsan dejinta ballanta, lacag-bixinta khadka tooska ah, maamulka xiriirka iyo xitaa wadaagista dukumintiyada waxayna ku dhigeysaa bog quruxsan boggaaga.
Astaamaha Muhiimka ah LiveSite ee vCita
Maamulka Xiriirka - Soo qabashada macluumaadka macmiilka oo toos u sii wad wadahadalka ay kula leeyihiin kooxdaada. Xiriirinta websaydhku waxay kuu oggolaaneysaa inaad maamusho xiriirada, aad hesho aragtiyo, aad ula socoto macaamilka macaamiisha, ka jawaabto oo aad dabagal ku sameyso adoo adeegsanaya qalab kasta. Xitaa waad otomatigayn kartaa isgaarsiinta macmiilka, ogeysiisyada iyo xusuusinta.
Abuur Foomam - Ku ururi macluumaadka macdanta `` lead '' iyo macmiilka marinka si fudud oo fudud oo leh foomka khadka tooska ah ku dhisa
Jadwalka khadka tooska ah - U oggolow macaamiisha in ay dejiyaan oo ballan kale u ballamaan waqti kasta, qalab kasta. Waxaad ku bixin kartaa liistada liiska adeegyada, khidmadaha iyo xulashada jadwalka. Xaqiijinta otomaatiga ah iyo xusuusiyeyaasha ayaa gacan ka geysan doona yareynta bandhigyada. Xitaa waxay isku dhejineysaa jadwalka taariikhdaada hadda jirta ee Muuqaalka, Google, ama kalandarka iCal.
Bixinta iyo Bixinta Khadka Tooska ah - U soo bandhig macaamiisha ikhtiyaarrada bixinta kaarka deynta ee habboon, xusuusinta otomaatiga ah, iyo qaansheegta qaaska ah. Waad dejin kartaa lacagta, canshuuraha oo aad bixin kartaa qiimo dhimis.
Wadaag Dukumenti - Si gaar ah ugu dir oo u soo hel feylasha macaamiisha adoo isticmaalaya bogga internetka qalab kasta.
LiveSite ee vCita sidoo kale wuxuu leeyahay plugin WordPress ah si uu uga dhigo mid si fudud loogu adeegsado qoraalkooda boggaaga WordPress! Iskuday si bilaash ah bartaada adoo adeegsanaya xiriiriyeheena kuxiran boostadan.
Tags: dejinta ballantamaamulka xidhiidhkawadaagista dukumintigaqaab dhismeqaansheegtaqaansheegta internetkabixinta internetkajadwalka internetkagujisidvcitabogga widget